စစ်တမ်းကြီးမြတ်မှုအတွက်ထိပ်ဆုံး ၅ ချက် | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 23, 2012 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 22, 2018 Hanna ဂျွန်ဆင်
အင်တာနက်ခေတ်မှတင်ပြသောရိုးရှင်းသောအမှန်တရားတစ်ခုမှာတုံ့ပြန်ချက်ကိုတောင်းခံခြင်းနှင့်သင်၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ပစ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိရန်လွယ်ကူသည်။ သင်မည်သူမည်ဝါနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုရှာဖွေနေသည်အပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောအရာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်စျေးကွက်သို့ရောက်လျှင်သူတို့၏အခြေအနေနှင့်သူတို့၏ရိုးရိုးသားသားထင်မြင်ချက်ကိုရရန်တန်ချိန်များစွာရှိသည်။ လုပ်ဖို့အခမဲ့နှင့်ကုန်ကျထိရောက်သောရွေးချယ်စရာ၏။ သင်ဤသို့လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သည် SurveyMonkeyငါ့ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်ဟာသဘာဝကျတယ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော, လုပ်ဆောင်နိုင်သောရလဒ်များကိုပေးအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများကိုဖန်တီး။
သင်သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအလေးအနက်ထားဆုံးဖြတ်ရန်၊ သင်၏မျက်နှာဖုံးတွင်မည်သည့်ရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုမည်၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်များကို ဦး စားပေးအဆင့်မြှင့်တင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ထုတ်လွှင့်ပွဲ၌မည်သည့် appetizers မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်အလေးအနက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တာ ၀ န်ယူသည်။ ဒါပေမယ့်သင်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး၊logic skip? ဒါကနှစ်ဆသောဒတ်ခ်ျလား?)
ကျွန်ုပ်၏စစ်တမ်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနောက်တစ်ကြိမ်သိမ်းဆည်းပါမည်။ Logic Skip ခုန်ကြိုးနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကိုကြီးကျယ်အောင်လုပ်ဖို့ဒီထိပ်တန်းအတွင်းပိုင်းအကြံပေးချက် ၅ ခုကိုငါပြောပြမယ်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရည်မှန်းချက်များကိုရှင်းလင်းခြင်းမရှိဘဲကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသင်စတင်မည်မဟုတ်ပါ (အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်၊ ပြောင်းလဲမှုများကိုမောင်းနှင်ခြင်း၊ သင်၏ပြိုင်ဘက်များအားအရှက်ခွဲခြင်းစသည်) ။ မရှင်းလင်းသောရည်မှန်းချက်များသည်မရှင်းလင်းသောရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာရလဒ်များကိုအလွယ်တကူနားလည်ပြီးပြုမူလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများတွင်နားလည်ရန်လွယ်ကူသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုရှိသည်။th မင်းလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီ) ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ရှေ့တွင်အချိန်ဖြုန်း:
သိသာထင်ရှားပါသည်။ သို့သော်မိနစ်အနည်းငယ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးပြည့်မီသောတုံ့ပြန်မှုများ (အသုံးဝင်သောနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သောတုံ့ပြန်မှုများ) သို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်သောအချက်အလက်များကိုကွဲပြားခြားနားစေသည့်စစ်တမ်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ သင်၏စစ်တမ်း၏ရှေ့ဆုံးမိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူခြင်းသည်သင်ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်နှင့်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူနိုင်ရန်မှန်ကန်သောမေးခွန်းများမေးရန်သေချာစေပြီး (နောက်ကျောအဆုံးတွင်သင့်အားအချိန်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကိုသက်သာစေလိမ့်မည်) ။
ဆက်သွယ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးနည်းတူ၊ သင်၏အွန်လိုင်းစစ်တမ်းသည်အလွန်တိုတောင်း၊ တိုတောင်းသောနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတုံ့ပြန်မှုအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်နှစ်ခုလုံးနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်မျိုးစုံကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သောမာစတာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
တိုတောင်းသောစစ်တမ်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအကြားစွန့်ခွာမှုလျော့နည်းသည်။ အရာဝတ္ထုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်ကူစေချင်သည်မှာသဘာဝဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူသူတစ် ဦး ကစိတ် ၀ င်စားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်ထိုဒေတာအစုကိုအနက်ဖွင့်ခြင်း (သို့မဟုတ်အတူတကွထုတ်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း) ၏ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုချန်ထားခဲ့သည်။
သင်၏မေးခွန်းတစ်ခုစီသည်သင်၏ဖော်ပြထားသောရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်ကူညီခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားကြောင်းသေချာပါစေ (တစ်ခုမထားပါနှင့်။ အဆင့် ၁ သို့ပြန်သွားပါ) ။ သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်အတွက်အချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်မပေးနိုင်သော 'nice to have' မေးခွန်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။
သင်၏စစ်တမ်းသည်အတော်အတန်တိုကြောင်း၊ လူအများစုက၎င်းကိုကောက်ယူစဉ်အချိန်သေချာသည်။ (Gallup နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ) SurveyMonkey ၏သုတေသနပြုမှုသည်၎င်းကိုပြသခဲ့သည် စစ်တမ်းသည်ပြီးပြည့်စုံရန် ၅ မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းရမည်။ ၆ - ၁၀ မိနစ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ၁၁ မိနစ်အကြာတွင်သိသိသာသာစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားမှုနှုန်းကိုတွေ့ရသည်။
သင်၏မေးခွန်းများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သီးသန့်ဗန်းစကားကိုရှောင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းများနှင့်အတူစစ်တမ်းများကိုမကြာခဏရရှိလေ့ရှိသည် -“ ငါတို့နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန်က (ဤနေရာတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း mumbo jumbo ထည့်ပါ)? "
သင်၏စစ်တမ်းကောက်သူများသည်သင်၏အတိုကောက်များနှင့်ဘာသာစကားများကိုသင်ကဲ့သို့အဆင်ပြေမည်ဟုမယူဆပါနှင့်။ သူတို့အဘို့အထုတ်စာလုံးပေါင်း (ကြောင်းသတိရပါth သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ပြေးခဲ့သည်တနျး? ဒီခြေလှမ်းအတွက်) အစစ်အမှန် (သို့) စိတ်ကူးထားတဲ့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတောင်းခံပါ။
သင်၏မေးခွန်းများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတိတိကျကျဖြစ်စေရန်ကြိုးစားပါ။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ သင်၏ HR အဖွဲ့နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကဘာလဲ။ To: ကျွန်ုပ်တို့၏ HR အဖွဲ့၏တုန့်ပြန်မှုအချိန်အပေါ်မည်မျှစိတ်ကျေနပ်မှုရှိသနည်း။
ပိတ်ထားသောပြီးသောစစ်တမ်းမေးခွန်းများသည်ဖြေဆိုသူများအတွက်တိကျသောရွေးချယ်မှုများ (ဥပမာ - ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်ပါ) ကသင်၏ဆန်းစစ်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အပြီးသတ်မေးခွန်းများသည်ဟုတ်သည်၊ မဟုတ်၊ ရွေးချယ်မှုများစွာသို့မဟုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာကိုယူနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းပြီးသောစစ်တမ်းမေးခွန်းများသည်လူတို့အားမေးခွန်းများကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်ဖြေဆိုခွင့်ပြုသည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးခွန်းများသည်သင်၏အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အလွန်ကောင်းပြီးအသုံးဝင်သောအရည်အသွေးရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် စုစည်း၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်တံခါးပိတ်မေးခွန်းများသည်ခက်ခဲလှသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးများသည် variable များစုံကိုတိုင်းတာရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါက (ဥပမာ - ၁ မှ ၅) ကိုစစ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးသင်အမြဲတမ်းသေချာအောင်ထားပါ။ အတိုင်းအတာပေါ်ရှိအမှတ်များတူညီသောပမာဏကိုသုံးပါ (သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေးလျှင်ဖော်ပြရန်ဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုပါ) နှင့်စစ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်နေခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသေချာစေပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းမရေမတွက်နိုင်သောနံပါတ်ကိုအသုံးပြုရန်ကူညီသည်။ သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်စစ်တမ်းကောက်သူများအားရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိသောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းသည်စစ်တမ်းကောက်ယူမှု၏အဓိကအချက် ၅ ချက်အတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကိုဖန်တီးသည့်အခါမှတ်သားရမည့်အခြားအရေးကြီးသည့်အရာများရှိသည်။ နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်များအတွက်ဤနေရာတွင်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ SurveyMonkey ဘလော့ဂ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
Tags: အနီးကပ်စစ်တမ်းမေးခွန်းပွင့်လင်းစစ်တမ်းမေးခွန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံlogic skipစစ်တမ်းဒီဇိုင်းစစ်တမ်းအရှည်စစ်တမ်းရည်ရွယ်ချက်စစ်တမ်းမေးခွန်းများကိုစစ်တမ်းအကြံပြုချက်များSurveyMonkeyစစ်တမ်းများzoomerang
ဧပြီ 24, 2012 မှာ 2: 04 pm တွင်
"မင်းရဲ့မေးခွန်းတိုင်းကို မင်းဖော်ပြထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီအောင် ကူညီပေးဖို့ အာရုံစိုက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။"
အမှတ်ကောင်းတယ်။ မစ်ရှင်မဟုတ်သော အရေးကြီးသောမေးခွန်းများဖြင့် လူများ၏အချိန်ကို မဖြုန်းချင်ပါ။ ဖောက်သည်တစ်ဦး၏အချိန်သည် အဖိုးတန်သည်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမေးခွန်းများကို မဖြုန်းတီးပါနှင့်။